Exclusive Video: 12 Ladies Live Show 2011, National Theatre, Yangon | Myanmar Celebrity Gossip & News
Exclusive Video: 12 Ladies Live Show 2011, National Theatre, Yangon
This is the Video of 12 Ladies Live Show which was held on 16 May 2011 at National Theater, Yangon. Myanmar Popular Singers; Kaw Ni, Jenny, L Sai Zi, Chit Thu Wai, Yadanar Mai, Chan Chan, Eaint Chit, Thiri Swe, May Sabae Nyo, Swae Lann Phyu, N Kai Yar and Twinster performed for this concert. "5 Stars A Nyient" also joined for this concert. Let's Enjoy the "12 Ladies Live Show"......
Video of MyanmarCelebrity.Com Exclusive Video
zawMay 21, 2011 at 2:26 AMတောဆန်လိုက်တာဗျာ အားလုံးပုံတုန်းကြီးပဲ.. :(ReplyDeletesai_bruceMay 21, 2011 at 4:25 AMhote pa ,,,ReplyDeletehtunMay 21, 2011 at 4:49 AMName of YADANAR MINE Musick is(E Shu) phyit par tal.ReplyDeleteLearn EnglishMay 21, 2011 at 5:14 AMchit thu wai design ka mite par tal..the rest are suck and dont knw wat they r singing....ReplyDeleteberbiMay 21, 2011 at 8:45 PMချစ်သုဝေကဒီလိုအကျပ်နဲ့လိုက်တယ် ရင့်ကျက်တဲ့ပအ၀တ်အစားနဲ့မိုက်တယ် ဂါဝန်တဖါးဖါးနဲ့ကာတွန်းကားလိုကလေးကလားလုပ်နေရင်တော့ကျပ်မပြည့်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တူသွားတယ် ငယ်ငယ်တုန်းကသူ့ကိုတော်တော်ကြည့်မရဘူး ကျပ်မပြည့်သလိုဘာလိုလိုနဲ့ ပေါတောတောနဲ့..ကြီးလာတော့အဖြူရောင်လေးပါသီချင်းမှာသူ့ဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တယ် ..ReplyDeleteko60May 21, 2011 at 11:42 PMအားလုံး လုံလုံခြုံခြုံနဲ့လှကြပါတယ်ဟိုပေါ် ဒီပေါ်မှ လှတယ် ထင်လို့ လားReplyDeletemosesMay 22, 2011 at 2:27 AMအားလုံး လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးဒီမိုကရေစီတဲ့ဗျာအရင်ကအတိုင်းပါလားReplyDeletecynthiMay 22, 2011 at 7:43 AMi dont dare to play that video click in front of my friends in foreign cox all of their songs are copy from english songs.whatashame!ReplyDeletenayyeikMay 22, 2011 at 8:02 AMသြော် တော်တော်တရားကျဖို့ကောင်းတယ်... ရတနာမိုင်က သူ့အသံကိုတောင် သူပြန်နားမထောင်နိုင်ဘူးထင်တယ်... နားကိုပိတ်ထားတယ်... အခြားလူတွေတော့ နားထောင်ပါစေပေါ့...ReplyDeleteSnowMay 23, 2011 at 4:21 AMချန်ချန် အကောင်းဆုံးပဲ။ReplyDeleteYummyHoneyMay 23, 2011 at 1:46 PMa kon lone bar tway wit tar mhan ma thite boo.. thiri sweakaung sone bai.. wine su khine thein par yin tawtapyan sar bai..ReplyDeleteဇော်ဂျီJune 6, 2011 at 11:29 PMhttp://www.youtube.com/watch?v=FYiU7A3TZUA&feature=relatedReplyDeleteyarwanaJune 26, 2011 at 9:18 PMn ကိုင်ရာ ကို အကြိုက်ဆုံးပဲReplyDeleteMaryarMoeJune 28, 2011 at 2:28 AMConcert director is lousy and recording is very bad. Singers are shameless.ReplyDeleteAdd commentLoad more...